Afhayeenka Alshabaab: Waligeen Dagaal Kuma Iclaamin Al-ictisaam * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Afhayeenka Alshabaab: Waligeen Dagaal Kuma Iclaamin Al-ictisaam
Muqdisho – Mareeg.com: Afhayeenka Alshaab Sheekh Cali Dheere ayaa beeniyey iney dagaal ku iclaamiyeen culimada Al-ictisaam ee ka mid ah garabyada culimo ee ka jiro Soomaaliya, kuwaasoo qaar ka mid ah la dilay, qaarna dilal ka badbaadeen, halka kuwa kalana sheegeen in loo hanjabay.
Cali Dheer oo qolka “Somali Islamic Dacwatu Tawxiid Center” ee Paltalkga dad su’aalo ku weydiiyey uga jawaabayey ayaa beeniyey iney ku dhawaaqeen dagaal ka dhan ah culimada Al-ictisaam ee dalka Soomaaliya, kuwaasoo horay u sheegay in Alshabaab khatar weyn ku hayaan.
“Waligeen Ictisaam iyo cid kale dagaal kuma iclaamin, qofkii warkaas sheegay ayaa cadeyn laga rabaa” ayuu yiri Cali Dheere oo ka jawaabayay su’aal la weydiiyay oo ku saabsaneyd Sheekh Maxamed Umal oo dhawaan Nairobi ka sheegay in loogu hanjabay in la dilayo.
Culimada Al-ictisaam ee ku kala sugan Muqdisho, Puntland iyo dalka Kenya ayaa horay si kulul u naqdiyey afkaaraha Alshabaab, waxaana Garowe kolhorwe lagu dilay Sheekh C/qaadir Nuur Faraax, iyadoo Sheekh Bashiir Axmed-Salaad ka badbaaday qarax gaarigiisa lagu xiray Muqdisho, halka Sheekh Umul uu Nairobi ka sheegay in Alshabaab ugu hanjabeen iney dilayaan.
Dhanka kale, Cali Dheere ayaa ka hadlay arrimo kale oo ay ka mid yihiin warar sheegaya inuu xiriir dhexmaray iyaga iyo Barre Hiiraale oo dhowr bilood ka hor laga soo saaray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, kadib markii ay isku dhaceen ciidamo uu wataty oo dhinac ah iyo kuwa Axmed Madoobe iyo milateriga Kenya oo dhinac kale.
“Ma jiro wax xiriir ah oo noo dhaxeeya anaga iyo Barre Hiiraale, waxaa ogeyn asigii ka mid ahaa Ridada, meel uu ku towbad keenay ma ogeyn iyo Media laga maqlay, marka warkaas waa been oo barabagaan ah”ayuu yiri afhayeenka Alshabaab Sheekh Cali Dheere .
Maamulka KMG Jubba ee uu hogaamiyo Axmed Madoobe ayaa ku eedeeyay Barre Hiiraale inuu xiriir la leeyahay Al-Shabaab, kadib markii laga saaray Kismaayo, kuna sugan yahay deegaanada Shabaab ka taliso oo ka baxsan magaalada.
Madaxweyne Xasan: Alshabaab Waa Laga Guuleystay Laakiin Weli Ma Aysan Dhiman